यौन सम्बन्धमा पुरुषहरू जस्तै प्रक्रिया मात्र आफैं गलत छ, किनकि उनीहरूले कमजोरी जस्ता कम महिलाहरू मन पराउँदैनन्। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै अपरान्ह क्षेत्र छ, तर त्यहाँ सामान्य स्थानहरू छन् जुन विपरीत सेक्सका सदस्यहरूमा संवेदनशील हुन्छ। धेरै महिलाहरु, विशेष रूप देखि अनुभवहीन, रुचि हो कि मनुष्य मौखिक सेक्स र खुशी को साथ चुने गए एक को रूप मा कसरि व्यवहार गर्दछ। धेरै यौन विज्ञापकहरूले साझेदारको शरीर अध्ययन गर्न सिफारिस गर्छन्, उदाहरणका लागि, तपाईं प्यानर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन साझेदारको शरीरसँगै हिड्न आवश्यक छ, छानिएको एक प्रतिक्रियालाई हेर्दै हेर्नुहोस्।
पुरुष निकायको अध्ययनका अनुसार महिला महिलाको तुलनामा कम्युनिष्ट क्षेत्रहरू कम छन्, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि साथीहरूलाई उत्तेजित गर्न कुन अंकहरू उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
कुन व्यक्तिले caresses मा रुचि राख्छ:
अनुहारमा थुप्रै तंत्रिका अन्तहरू छन्, त्यसैले मानिसले पाजाको मालिश पनि आनन्द उठाउनेछ। संवेदनशील होंठ, कान र कानका छाला हुन्।
जब तिनी गर्दनमा चुम्बन गरिन्छ र धेरै संवेदनशील गर्दनको पछाडि धेरै जना पुरुषहरू सामान्यतया पिच्छ्छन्।
एक ठूलो संख्या को तंत्रिका अन्त एक व्यक्ति को छाती मा हो, यसैले हल्का स्पर्श संग, उनि खुशी महसूस गर्छन। यो पनि मानिस को निपल को जीभ को हेरचाह गर्न सिफारिस गरिएको छ।
धेरै मानिसहरू रुचि राख्छन् कि पुरुषले गुदा caresses प्यार गर्दछ, किनकी यो प्रश्न बेकार छ र केहि सीधा सोध्न हिम्मत गर्नेछन्। संवेदनशील कोशिकाहरू स्क्राउथमबाट जुनसुकै क्षेत्रमा क्षेत्रमा भेटिन्छ। यो स्थान सावधानीपूर्वक पट्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। यदि एक व्यक्तिले राम्रो प्रतिक्रिया देखाएको छ भने, तपाईं गुनासो कोसिस गर्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ।
पेट caresses को लागि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को बुलाया नहीं जा सकता, तर यदि स्ट्रोक को प्रदर्शन गर्न को लागी अग्रप को समयमा, नेभिगेशन सम्म माथि देखि तल सम्म चलती छ, तपाईं उत्तेजना बढ सकते हो।
तपाईं careses को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय क्षेत्र मध्ये कुनै मिस गर्न सक्नुहुन्न। यो स्पाइडको साथमा छाला, साथ साथै कंधे ब्लेड बीचको क्षेत्रमा स्ट्रोक गर्न सिफारिस गरिन्छ।
यस कुरामा कुरा गर्ने कुरा हो कि पुरुषहरूले फ्रान्सका प्यारी अभिभावकहरूलाई मन पराउँछन्, यो उत्पत्तिहरूको उत्तेजनाको सम्झना असंभव छ, किनभने यसले मानिसलाई सबैभन्दा ठूलो आनन्द महसुस गर्न अनुमति दिन्छ। यो नरम तर तीव्र आचरणहरूमा प्राथमिकता दिनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि सबैभन्दा अधिक संवेदनशील शिशुको टाउको हो।
कम्तीमा5मिनेटको लागि परिभाषित क्षेत्रहरू दिएर, महिलाले निश्चित रूपमा खुशीको लागि कृतज्ञता पाउनेछन्।
कसरी एक मानिस प्रेम व्यवहार गर्दछ?
5 महिनामा बालबालिका - विकास र पोषण
खर्सोन्स - सेभस्टोपोल
औंला औंला मार्फत
डिशवाशरको लागि पाउडर
एलेक्सले के गर्छ?
रातो कोट 2013
यहूदा डेन्चेले डेविड मिल्ससँग सम्बन्धको बारेमा यसो भने: "कसरी साझेदार छ भनेर बुझ्न सकिन्छ?"
ब्लाउजिंग कलान्चे - घरको हेरविचार
बोट्स गणना गर्दै
निलम्बित चेहरे को सिस्टम
कारमा 12 भन्दा कम बच्चाहरू स्थानान्तरण गर्न नियम
हजुरआमालाई कसरी हटाउन सकिन्छ?
नीलो आँखाका लागि छाया
युवाहरूको बीचमा अपराधहरूको रोकथाम
फ्याक्स फर को फर कोट